လံကွတ်တီနှင့်အမျိုးသားများ အေးခဲတဲ့ညမှာ ရေခဲရေဖြင့်သန့်စင်ခြင်း !!! ဟော့ကိုင်းဒိုးဓလေ့ရိုးရာ !!! - JAPO Japanese News
သော 15 Jan 2021, 14:29 ညနေ
အအေးပိုလှတဲ့ ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ညက လံကွတ်တီနှင့်အမျိုးသား (၄) ဦးဟာ၊ ဂျပန်ရဲ့မြောက်ဘက်အစွန်ဆုံးစီရင်စုဖြစ်တဲ့ ဟော့ကိုင်းဒိုးရဲ့မြို့ရှိ Samegawa နတ်ကွန်းမှာ ရိုးရာဓလေ့အဖြစ် ၎င်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကို ရေခဲရေများဖြင့်ပတ်ဖြန်းခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဓလေ့ရိုးရာကို “ Kanchu Misogi Matsuri” လို့ခေါ်ပြီး၊ များစွာသောငါးဖမ်းခြင်းနှင့်ရိတ်သိမ်းခြင်းတို့အတွက် ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျင်းပကြပါတယ်။
ဟော့ကိုင်းဒိုးရှိ Samegawa နတ်ကွန်းရဲ့ပရဝုဏ်မှာ ည ၇ နာရီအချိန်၊ အပူချိန်အားဖြင့် 0°C အောက်ရောက်လာချိန်မှာတော့ အဝတ်တစ်ပိုင်းသာပါတဲ့အမျိုးသားများဟာ အော်ဟစ်ရင်းသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အေးခဲလှတဲ့ရေခဲရေများဖြင့် ပတ်ဖြန်းသန့်စင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီပွဲတော်ကို ၃ ရက်တိုင်ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော် ယခုနှစ်ကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ကာကွယ်မှုအနေနဲ့ ပွဲကို ၂ ရက်သာကျင်းပဖို့စီစဥ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီရိုးရာကို ၁၈၃၁ ခုနှစ်ကနေစပြီးကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုအချိန်နတ်ကွန်းသို့လာရောက်ကိုးကွယ်သူများဟာ ၎င်းတို့ရဲ့အိပ်မက်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြီး၊ စပါးများစွာရိတ်သိမ်းရဖို့ရန်အတွက် ပင်လယ်၌ကိုးကွယ်ရာပစ္စည်းတွေကို ဆေးကြောခဲ့ရာကနေ ဒီရိုးရာကိုအစပြုခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဝေးပြေးလမ်းမမှာ ၃၀ ရက်နေ့ကနေစပြီး ချိန်းတပ်ဆင်မှုစည်းကမ်းနှင့်အတူ၊ လမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတိပေးထား
ကြောင်လေးတွေကို ကူညီချင်တယ်! အထက်တန်းကျောင်းသူလေးများက အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တဲ့ ပုံဖော်မှု